Iindaba-Ikoteyishini igcinwa iiveki ezimbini
Okwangoku, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, ikowuteshini yethu yokuthumela ngaphandle kwezibane inokugcinwa kuphela iiveki ezimbini. Kutheni le nto isenzeka? Ezona zizathu ziphambili zezi zilandelayo:
1, Umda woMbane:
Okwangoku, ukwenziwa kombane wasekhaya kuxhomekeke ikakhulu kumaziko ombane ukuvelisa umbane ngamalahle. Nangona kunjalo, ukuhla kwemveliso yamalahle kuya kukhokelela ekwenyukeni kwamaxabiso amalahle, nto leyo eya kukhokelela ekwenyukeni kweendleko zokuvelisa amandla. Ngenxa yobhubhane, ii-odolo ezininzi zangaphandle ziye zangena kweli lizwe, kwaye iintambo zokuvelisa zonke zisebenza ngombane, ngoko ke iindleko zokuvelisa umbane ziye zanda, kwaye ilizwe lingathatha amanyathelo okuthintela umbane kuphela. Ngeli xesha, kuya kubakho inani elikhulu lee-odolo eziqokelelweyo. Ukuba ufuna ukuvelisa ngokutyibilikayo, kufuneka unyuse iindleko zabasebenzi, ngoko ke amaxabiso emveliso kuya kufuneka ukuba anyuke.
2, Iindleko zokuThumela
Kwiinyanga zamva nje, ukunyuka okukhawulezileyo kwamaxabiso omthwalo kuye kwakhokelela ngokuthe ngqo ekwenyukeni kweekowuteshini zizonke. Ngoko kutheni ixabiso lempahla linyuka ngokukhawuleza? Ibonakaliswa ikakhulu kule miba ilandelayo:
Okokuqala, ukususela oko kwaqhambuka lo bhubhani, iinkampani ezinkulu zeenqanawa ziye zanqumamisa iindlela enye emva kwenye, zanciphisa inani lohambo lokuya kwiibhokisi zokuthumela kwamanye amazwe, zaza zadiliza iinqanawa ezingasebenziyo. Oku kubangele ukunqongophala konikezelo lweekhonteyina, ukungonelanga kwezixhobo ezikhoyo, kunye nokwehla okukhulu komthamo wezothutho. Imarike yothutho iyonke emva koko "ibonelelo ligqithile kwimfuno", ngoko ke iinkampani zokuthumela ngenqanawa ziye zawanyusa amaxabiso azo, kwaye nesantya sokunyuka kwamaxabiso siya phezulu ngokunyuka.
Okwesibini, ukuqhambuka kobhubhane kuye kwakhokelela ekugxininiseni okuphezulu kunye nokukhula kwee-odolo zasekhaya, kunye nokwanda okukhulu kwenani lezinto ezithunyelwa ngaphandle kwempahla yasekhaya. Inani elikhulu lee-odolo zasekhaya likhokelele ekunqongopheni kwendawo yokuthumela ngenqanawa, okubangele ukwanda okuqhubekayo kwempahla yolwandle.
3, Ukunyuka kwamaxabiso eAluminiyam
Uninzi lwezibane zethu zenziwe nge-aluminiyam. Ukunyuka kwamaxabiso e-aluminium ngokuqinisekileyo kuya kukhokelela ekunyukeni kweekowuteshini. Ezona zizathu zokunyuka kwamaxabiso e-aluminiyam zezi:
Okokuqala, phantsi kwenjongo yokungathathi hlangothi kwekhabhoni, imigaqo-nkqubo echaphazelekayo iye yaziswa, njengokunciphisa amandla okuvelisa i-electrolytic aluminium. Ukunikezelwa kwe-aluminium ye-electrolytic kuthintelwe, amandla okuvelisa ayancipha, kwaye i-inventory iyancitshiswa, kodwa umthamo womyalelo uyanda, ngoko ixabiso le-aluminium liya kunyuka.
Okwesibini, ngenxa yokuba ixabiso lentsimbi liye lanyuka ngaphambili, i-aluminium kunye nentsimbi inobudlelwane obuhambelanayo kwezinye iimeko. Ngoko ke, xa ixabiso lentsimbi liphakama kakhulu, abantu baya kucinga ukutshintshela i-aluminium. Kukho ukunqongophala kokubonelela, okukhokelela ekunyuseni kwexabiso le-aluminium.
Ixesha lokuposa: Nov-12-2021